Misoro yeNhau dzaNhasi, Chishanu, Chikumi 04, 2021
Dare repamusorosoro reSupreme Court rinoburitsa mujeri nhengo mbiri dzeMDC, VaLast Maengehama naVaTungamirai Madzokere, avo vanga vari mujeri kwemakore gumi mushure mekupomerwa mhosva yekuponda mumwe mupurisa kuGlen View , richiti hapana humbowo hunoratidza kuti vakapara mhosva iyi.
Kambani inoona nezvekugara zvakanaka kwevanhu vari pamudyandigere yeNational Social Security Authority yavhura nhasi muzinda wayo wekuchengeta pamwe nekurapa vashandi vayo pamwe nevari pamudyandigere vanenge vabatwa neCovid-19.
Bazi rezvehutano rinozivisa kuti rawanira vanhu vari mudunhu reHarare vanoda kubaiwa nhomba yepiri yekudzivirira Covid-19 yerudzi rweSinovac, uye vanoda kubaiwa vanokwanisa kuenda kuzvipatara zveParirenyatwa, Sally Mugabe pamwe neChitungwiza.
Vanhu vakawanda muChinhoyi vave kurapwa pakiriniki yekereke
yePresbyterian sezvo makiriniki nezvipatara zvekanzuru nehurumende
Mutambo wanga wakamirirwa nevazhinji weHarare Derby pakati peCaps United neDynamos uri kutambwa nemusi weSvondo muNational Sports Stadium.
Muchirongwa cheLiveTalk na8pm tiri kutarisa zviri kuitika kumitambo yeBulawayo Arts Festival iyo iri kupera mangwana.